Wefti uu hogaaminayo Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin oo soogaadhey K/Africa.
Dalka Norway oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyay Xasan Waraabacade - Gudoomiyaha Horumarinta Ciyaaraha Somaliland .
Saeed Abdi Mohamed,
Waa Sawir aan kaqaadey waftiyadii ugu horeeyey oo kasocda Somaliland oo yimaada K/Africa, waftigan oo uuhogaaminayey waziirkii arimaha dibada ee Somaliland sanadkii 2000 Mudane Fagadhe, iyo waziirkii isgaadhsiinta oo hadana weli siihaya jagadaasi Mudane dhoolayare iyo waziirkii caafimaadka Mudane Dr. Abdi awdaahir oo shir jaraa’id uguqabtey Jaaliyada R.Somaliland iyo Soomaali kale xafiiska guri martisharafka Somaliland kuleedahey K/Africa oo kuyaala Pretoria. Taariikhda aan sawirkan qaadey waa 2000kii.
Pretoria, South Africa, Wefti uu hogaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland, Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin ayaa shaley duhurnimadii kasoodegey gegeda Duyuuradaha ee Caalamiga ah ee Magaaloweynta Johannesburg. Wefti sharafkan oo si eykudheehantahey habmaamuseed qaran ey ugusoodhaweeyeen madaarka xubno kasocda Dowlada K/Africa iyo qeybo kamid ah Jaaliyada R.Somaliland ee kudhaqan wadankani. Weftiga oo transit ku ahaa Johannesburg waxey isla gelinkii danbe ee manta usii ambobaxeen magaaloweynta xeebta kutaal ee Capetown, halkaas oo soodhaweyn heer sare ah ey iyana kalakulmeen Dowlada K/Africa & Jaaliyadda R.Somaliland ee Capetown.
Weftigan oo kakooban Marwada koowaad ee Somaliland, Huda Barkhad Aadan, Wasiirka Arrimaha Dibadda, Marwo Edna Aadan Ismaaciil, Wasiirka Warfaafinta Mudane Cabdillaahi Maxamed Ducaale dhoolayare, iyo Wasiirka Kalluumaysiga iyo Horumarinta Xeebaha, Mudane Maxamed Faarax [Oday], booqashadan Madaxweynaha & waziiradu waxey kadanbeysey casuumad ey kaheleen Dowlada K/Africa halkaas oo mudada 11 casho ah oo ey joogidoonaan K/Africa iyaga oo lakulmi doonaan Ganacsato waaweyn & Siyaasiin kamid ah Xisbiga talada wadankan gacanta kuhaya ee ANC da, sida uu iixaqiijiyey waziirka warfaafinta ee Sland Mudane Ducaale,. Waziirku waxa kale uu ixaqiijiyey in arimaha ey u yimaadeen ey kamidyihiin:
In Madaxweyne Rayaale & weftigu ey lakulmidoonaan Ganacsatada K/Africa sida Tokyo Sexwale oo Nelson Mandela ey kuwada xirnaan jireen Jaziirada Robben Islandka oo hada madax ka ah Company ga Mvelaphanda Holdings oo macdanta kaqoda K/Africa & Oppenheimer oo ey kawada xaajoondoonaan arimaha ey kamidyihiin Maalgelinta Somaliland & arimo kalle.
In kor loo qaado xidhiidhka Iskaashiga Dhaqaalaha, Bulshada Rayidka ah, Dibloomaasiyadda, ee u dhaxeeya Somaliland & K/Africa.
Inta ey joogaan weftigu waxa madaxweynaha iyo weftigu ey qaadandoonaan tababaro kusaabsan arimaha sida doorashooyinka Baarlamaanka ee Somaliland oo laqabandoono, kuwa nabadgelyada iyo xoojinta xiriirka udhaxeeya Somaliland & wadamada ey Jaarka yihiin.
Weftiga Madaxweyne Rayaale waxey qabandoonaan Seminaaro & shirar ey ugawaramyaan K/Africa Horumarka bulsho dhaqaaleed, siyaasadeed iyaga oo kuqabandoona Seminaaradan Jaamacadaha K/Africa Iyo machadka Global Dialgue iyo machadka dooroshooyinka K/Africa iyaga oo islamar ahaantaana maridoona gobolo dhowr ah oo katirsan K/Africa.
Xidhiidhka udhaxeeya K/Africa & Somaliland waa mid aad u adag oo u ifaaya iyaga oo K/Africa & SL ey markaste isdhaafsadaan wufuud isdabajoog ah taasi oo dhidibada u aaseysa xiriirka dibloomaasiyadeed, dhaqaaleed, bulsheed ee udhaxeeya labadawadan ee iskuwaayo aragnimada ah,. Halkaas oo weftigii uguhoreeyey ee Somaliland kasocdey ey soogaadheen K/Africa sanadkii 2000 waftigaas oo uuhogaaminayey waziirkii arimaha dibada ee waqtigaas oo ahaa Mudane Mahamuud Fagadhe & isla waziirkan isgaadhsiinta ee hada, & waziirkii Caafimaadka Mudane Dr. Abdi Awdaahir, waxaa iyana xusid mudan waftigii uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee Somaliland Md. Mohamed H. Ibraahim Egal “Eebe ha u naxariistee”, oo uyimid K/Africa in uu caafimaadkiisa hubiyo halkaas oo kugeeriyoodey, Madaxweyne Egal oo sabab u ahaa xiriirkan ifaya ee u dhaxeeya Somaliland Iyo South Africa. Dhinaca K/Africa waxaa booqdey Somaliland sanadadii inadhaafey siyaasiin, tujaar, culumada diinta, oo kasocda K/Africa ayaa booqdey Somaliland iyaga oo aad u daneynayey waa maalqabayaasha sida Tokyo Sexwale oo sanadkii hore booqdey Somaliland, in ey maalgashadaan Somaliland oo aad u xasiloon nidaam iyo dowlad iyo cadaalad na ey kajirto.
(Maalqabeenka Tokyo Sexwale oo booqdey Somaliland)
Lasoco barnaamijka Weftiga oo aanu idiinsoogudbindoono markaste…
Midig kasoobilow waa Waziir kuxigeenka wazaarada arimaha dibada ee K/Africa Mudane Aziz Pahad, waxaa kuxiga Maalqabeenka weyn ee Matsape oo madax ka ah company macdanta qoda iyo Saeed oo kasocda bahweynta Saxaafada Somaliland iyo Swane oo heysta ururka shaqaalaha ee K/Africa, xafladan oo kadhacdey Pretoria waxaa lagaga hadlayey ama abaalmarino lagugudoonsiiyey soohalgamayaashii usoohalgamey K/Africa waqtigii midabkalasoocu kajirijirey.
Bilad sharafeed Hassan warabe Ade
By Mashad Turbashaash.
Xaflad si quruxbadan looga soo shaqeeyay oo ay iska kaa shadeen Wax garadka degen magaalada Oslo iyo jaaliyada Somaliland ee ka dhisan dalka Norway.
Xassan Warabacade( Hassan-Weyne) oo ahaan jiray cayaartooy, una ciyaari jiray kooxdii la oran jiray Madbacada Qaranka, intii uunan burburin wadankii Somalia.
Xassan oo waayihii danbe dhabarka u dhigtay in uu caawiyo dhalinyarada yar yare e soo kacaysa, gaar ahaan kuwa aad u xiiseeya in ay ciyaaraan kubada cagta.
Xassan Waraabacade waxa uu dhowaan ka soo laabtay Somaliland isagoo soo maray dalka Ingiriiska oo uu xidhiidhiyaha Jaaliyadaha yurub iyo Xukuumadu Mr Cabdifatax uu ku gudoonsiiyay London bilad sharafeedka 2004 oo uu ku mutaysay sida uu gacatna weyn uga geystay horumarinta ciyaaraha Somaliland.
Waxaa uu dhalinyaradaas ka caawiyaa qalabkii ay xiran lahaayeen , iyo isaga oo waliba ku dhiiri galiya in ay iskaga fogaadaan dhamaan dhaqan xumada ay dhalinyarada qaarkood ku kacaan.
Waxa uu xassan sida uu noo sheegay la kaashadaa dhamaan bahwaynta jecel Sportiga ee dagan- Somaliland, waxayna soo qaban qaabiyaan tartamo ay ku tartamaan dhamaan kooxaha ka dhisan Somaliland goboladeeda.
Waxa kaloo Hassan aad u caawiyaa dhalinyarada laga tiro badan yahay isaga oo u sameeyay koox runtii qalabkooduna u dhan yahay.
Waxaa xafladaa fikradeeda lahaa ururka magaciisa marka la soo gaabiyo layiraa S.W.O.ee ka dhisan Oslo Norway Somaliladn Walfare Organisation.
Waxaa aqristoow xafladaa ka soo qayb galay dhamaan bahweynta Somaliyeed ee jecel Sportiga.
Xafladaas oo uu furay Maamulaha ururka S.W.O - Mr Korea una Mahad celiyay wax qabadka Xassan,isaga oo hadalkii sii ku siidaray cidii dhalinyarada yar yar wax u qabata aan marnaba jaaliyadu ilaawayn abaal marinteedana la siinayo.
Waxa isna hadalkii la wareegay Xassan, isga oo tusaalaysiiyay hawshii ay soo qabteen iyo hawsha sugaysa, iyo in aan qofna laga xigin in uu wax taro dhalainyarada. Waxa uu hadaladiisii ka mid ahaa in hadii aad hal kubada gayso wadankii aad samaysanayso 22 saaxiib, laba kubadoodna 40 saxiib.
waxaad halkaas ka dareemaysaa faaiidada ay kubadu leedahay.
Markii uu Xasan hadaladiisii wax ku oolka ahaa dhamaystay, ayaa halkaa waxaa lagu gudoon siiyay 4 biladood iyo ubax ay soo diyaariyeen ururka S.W.O. iyo dhalinyaro gooni gooni u gudoon siiyay shahaado sharaftii sanadka 2004
Waxa kaloo halkaa lagu daawaday cajalad Vidio ah oo ahayd cayaarihii gobolada ee Somaliland.
Halkaas oo ay fadhiyeen boqolaal kala taageeraya gobolada iyaga oo si quruxbadana u daawanaya. Dharka ay lixda gobol ku ciyaarayeen dhamaantood waxa ku deeqay Xasan, sidoo kale xasan wuxuu ku deeqay 120 kubadood.
Waxaa kaloo iyana la ilaawi Karin fanaaniintii halkaas ka tumayay gaar ahaan fanaanka wayn ee Reer Oslo aadka u jecel yihiin waa Ali Cismaan - iyo Ali Isaqoow. Oo labaduba heeso aad loola dhacay halkaas nooga qaaday.
Waxaa uu Xassan hadaba u Mahad celinayaa dhamaan dhalinyaradii iyo ururadii ka soo qayb galay iyo dhalinyaradii soo qabanqaabisayba.
Gaar ahaan waxa uu u Mahad celinayaa ururka S.W.O, S.S.C. IYO Mr.Ahmed Madar oo ahaa ninkii fikradan lahaa.
Waxaa kaloo la ilaawi- Karin Mr Baashe oo ahaa isku xirihii barnaamijka. Iyo Xamse ,Caddaay, Ali, kamare qaade Liibaan. Iyo dhamaan dhalinyaradii ka soo qayb galay. By S.W.O
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 31, 2005
Waraysigii Sh. Cumar Faaruuq